Late Abba Kyari Kukura Kwemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
musha Africa Abba Kyari Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Facts
Iyo Biology yaAbba Kyari (Late Chief weVashandi) inoratidza Chokwadi pane yake Yehucheche Nyaya, Mhuri, Vabereki, Hupenyu hwepakutanga, Vadzimai, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo. Iyo ngano yezviitiko zvinozivikanwa zveBio yake. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitangei.
Abba Kyari Yehucheche Nyaya:
Kwapera Nguva Abba Kyari (akagadzwa Chief weVashandi kuna Muhammadu Buhari) akazvarwa makore mashoma pasati pasununguka rusununguko rweNigeria panguva yeBritish colonial era.
Zuva rake rekuzvarwa rinogona kunge riri muma1950. Nyanzvi yezvematongerwo enyika akaberekerwa kuchamhembe kweNigeria kuvabereki vake vanobva kuNorth-Eastern chikamu cheNigeria.
Abba Kyari Mhuri Yemhuri uye Nhoroondo:
Wekumusoro wevashandi akakurira mumhuri yeMuslim yemhuri yeKanuri dzinza. Iye ane mhuri yake yemhuri yakabatana nehuminhipo yeBorno nyika ino iri kuchamhembe-kumabvazuva nyika muNigeria.
Pakutanga, Kyari aigara achikurudzirwa nevabereki vake kusimudzira ruremekedzo rwepamusoro.
Kuzvarwa mumhuri yechiIslam, akanyoreswa kuti adzidze zvakawanda nezvekutenda kwake kwechiIslam pachikoro cheIslam icho chaipindwa nevose vana vechiMuslim munzvimbo yehudiki hwake.
Abba Kyari Hupenyu hwepakutanga:
Kurera kuchamhembe kweNigeria, Late Kyari aifanira kucherechedza minamato yake yemazuva mashanu semwana anoshingaira wechiIslam. Kare ikako, kazhinji aimhanya mumigwagwa neshamwari dzake kunotamba panguva yake yekuzorora.
Ari mukomana mudiki, Kyari akarererwa pamwe chete nevakoma vake nehanzvadzi. Akadzidza zvakawanda achibata nyaya dzinomuka pakati pake nevanin'ina vake.
Zvinokufadza iwe kuti uzive kuti nzira yake yekudyidzana yekugadzirisa nyaya inogona kunge yakawanikwa kare asati aongorora basa rake rehunyanzvi. Iyi feat iri pakati peavo vane basa rekumuka kwake.
Abba Kyari Dzidzo:
Panguva Abba Kyari paakasvika zera rekudzidza, akanyoreswa kunodzidza mune chisina kuzivikanwa chikoro chepuraimari nesekondari.
Mushure mekufunda kwemakore akati wandei, Kyari akapedzisa dzidzo yake yepuraimari nesekondari ndokuenderera mberi nekuenderera mberi nedzidzo yake kuYunivhesiti yeWarwick kwaakadzidza Zvemagariro Evanhu.
Abba Kyari iri rakabudirira alumnus yeYunivhesiti yeWarwick. Mufananidzo wechikwereti: Citmagazine.
Akapedza kudzidza kuYunivhesiti yeWarwick mugore ra1980 ndokuenderera mberi nekuwana degree reBachelor muMutemo kubva kuYunivhesiti yeCambridge mugore ra1983.
Munguva yezvidzidzo zvake kuWarwick, Kyari zvishoma nezvishoma akacherekedza nzanga pamwe nekudyidzana pamwe nehunhu hwevanhu vari munharaunda.
Mukuru wezvematongerwo enyika akashamiswa nekuti vanhu vangangopinda sei mukusawirirana pamusoro pezvinhu zvidiki nekuda kwekusava nehanya mumaonero avo.
Kuchera zvakanyanya mune zvemagariro, akave akatsunga kugadzirisa kusagadzikana munharaunda. Nekudaro, akaongorora kudzidza mutemo achangopedza kudzidza kubva kuYunivhesiti yeWarwick.
Abba Kyari Kwekutanga Basa Roupenyu:
Achitendiswa nenyaya yekuti achiri kuda kuvaka ruzivo rwake muMutemo, Abba Kyari akaenderera mberi nekudzidza paUniversity yeCambridge kwaakawana degree rake remasters mune zvemutemo mugore ra1984.
Akakurumidza kudzokera kuNigeria ndokutanga kuita basa rake. Waizviziva here?… Kyari aishandira kambani yemagweta “Fani-Kayode naSowemimo ” paakadzokera kuNigeria uye akazobvuma kupihwa basa kuNew Africa Holdings Limited Kaduna.
Akashanda seMupepeti wekambani kubva mugore ra1988 kusvika gore ra1990.
Abba Kyari akatanga kusangana naFani Kayode paakashanda kufemu yake pakati pemakore makumi masere. Mifananidzo Credits: Thisdaylive uye Twitter.
Late Abba Kyari Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Kusimuka pasirefu yemukurumbira yaisambove rwendo rwakareruka kuna Abba Kyari sezvo aifanira kuvaka yake hunyanzvi portfolio nekushanda uye kubata mabasa mumasangano ane mukurumbira akasiyana.
Mukuda kwake kukwidziridza hunyanzvi hwake, Abba Kyari akaenda kuInternational Institute for Management Development muLausanne, Switzerland, uye akapindawo muchirongwa cheManagement na1992 cheManagement Development kuHarvard Bhizinesi Chikoro.
Late Abba Kyari's Bio - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Kusagadzikana uye kushingairira akaona Kyari kuburikidza nenguva dzematambudziko kusvika paakagadzwa kuve Commissioner weForestry uye Animal Resources muBorno State mugore ra1990.
Kuvimbika kwake kwakave hwaro hwakamupinza mukushanda semunyori webhodhi reAfrican International Bank Limited kubva muna1990 kusvika 1995.
Waizviziva here?… Kyari akashandisa hunyanzvi hwake hwekutonga nekushanda semutevedzeri mukuru achitungamira manejimendi kuUnited Bank yeAfrica uye munguva pfupi akave mukuru webhangi rimwe chete souya aimbova emir weKano, Sanusi Lamido Sanusi.
Nekukurumidza kusvika kunguva yekunyora iyi bio, anonoka Abba Kyari anga ari munhu ane simba mune zvematongerwo enyika mukuratidzira kutonga kweMutungamiri. Muhammadu Buhari.
Akagadzwa saMukuru weVashandi kuMutungamiri Muhammadu Buhari muna Nyamavhuvhu 2015. Munguva pfupi yakapihwa Mukuru weAir of Niger (OON) - kukudzwa kwenyika muNigeria - semhedzisiro yemupiro wake wakakura kuzvinhu zvemunyika.
Nechibvumirano akatsinhana kubatana ruoko neMutungamiriri weNigeria, Mutungamiri Muhammadu Buhari pamusoro pekugadzwa kwake. Chikwereti chemufananidzo: Opinionnigeria.
Mukadzi waAbba Kyari:
Hupenyu hwehukama hwaKyari hwaitenderera pasirese renzveri sezvo aive akaroora muroora-mukoti waIsau Tahir uyo aive nyanzvi yezvematongerwo enyika asati apinda mune zvematongerwo enyika. Kuroora kwaAba Kyari nemukadzi wake, Mai Abba Kyari kwakakonzera kuberekwa kwevana vana.
Anonyanya kuzivikanwa pavana vaAbba Kyari mwanasikana wake Aisha Abba-Kyari watichataura nezvake munguva pfupi.
Mai Abba Kyari (2nd kurudyi) nevamwe vakadzi vane mukurumbira pachirongwa che 2017 chekuwaniswa kwehunyanzvi muLagos. Chikwereti chemufananidzo: Lagosstate.
Hupenyu Hwemhuri hwaAbba Kyari:
Muchikamu chino, tichakanda mwenje wakawandisa paMusi weVashandi vemhuri mhuri yeVashandi kutanga nevabereki vake.
Vabereki vaAbba Kyari:
Kunyangwe iye Mutungamiriri weVashandi awana mukurumbira wakakura mumamiriro ezvematongerwo enyika eNigeria, iye akachengeta ruzivo rwakawanda nezve mhuri yake zvakavanzika. Abba Kiari Akavakirwa imba yake muhupenyu hwakapfuma hwemhuri mhuri asi anoti zvishoma nezva baba vake naamai vakewo.
Abba Kyari Vana- Mwanasikana uye Vamwe:
Mai Aisha Abba-Kyari mwanasikana waAbba Kyari. Iye akachenjera kwazvo uye akadzidza musikana wechidiki akawana zvakanyanya tonne yezviitiko mumakore ake ekutanga.
Nekuda kwekudzidzira kwake kudzidza, Aisha akagadzwa seMutevedzeri Wemutungamiriri weNigeria Changamire Investment Authority (NSIA). Parizvino, zvishoma zvinozivikanwa nezvevamwe vake vana.
Aisha Kyari anoisa kunyemwerera kwakanaka padivi pababa vake. Mufananidzo wechikwereti: Ivory-ng.
Abba Kyari Vanun'una nehama:
Kurarama mumakore ake ekutanga makumi manomwe, Abba Kyari haazvibatanidze mukutaurirana kuburikidza neakawanda masocial media mapuratifomu, saka, haawanzo kutaura nezvehama dzake nehama.
Vanhu vazhinji vanga vasinganyanyo kunetseka nezvedzinza raAbba Kyari nekudaro vachirasa kufarira kuziva nezvesekuru nasekuru vake pamwe nasekuru vake nasekuru naambuya.
Kunyanya zvakadaro, zvinosuwisa kuti hapana chinhu chinozivikanwa nezve babamunini vake nababamunini pamwe nevakoma nevanin'ina vake kunyangwe hazvo ari wezvematongerwo enyika ane simba muNigeria.
Late Abba Kyari Hupenyu Hwepamwe:
Chii chinoita kuti Abba Kyari ave mukobvu?… Gara kumashure apo tinokuunzira magariro ehunhu hwake ausingawanzonzwa nezvezvake mukuedza kwake. Kuvimbika kwake kukuru kumutungamiri weNigeria (Buhari) kunoratidza kuti angangodaro akagara nhaka yehu Taurus Zodiac hunhu.
Hukama hwaAbba Kyari nemutungamiriri weNigeria, Mutungamiri Muhammadu Buhari anodarika hukama hwevakuru-nevashandi sezvo vari shamwari dzepedyo.
Izvo zvinoshanda kutaura kuti Mutungamiri Buhari akaita rombo rakanaka kuve nekugadza mumwe munhu angangoda kutora bara kuti ave nechokwadi chekuti Mutungamiri Buhari apona.
Kunyanya zvakadaro, kune vadzidzi vesainzi yesimba, Abba Kyari chidzidzo chekare chemubatsiri uyo akatsanangura zvakare kuvimbika, kusava neudyire, uye kuzvipira pavanogona kwazvo.
Late Abba Kyari Chokwadi:
Kuputira yedu Abba Kyari humwana nyaya uye biography, heino zvishoma-inozivikanwa chokwadi nezvake iyo ichakubatsira iwe kuti unzwisise zvakakwana mufananidzo weBio yake.
Ukama hwake naFemi Fani Kayode:
Femi Fani Kayode anova ndiye aimbova Gurukota reAviation ishamwari yepedyo yaAbba Kyari. Mukutarisana nemakakatanwa akati wandei akamutswa nekugadzwa kwaKyari, Fani Kayode akamukorokotedza nekugadzwa kwake kutsva.
Fani, muchinda wePDP akarondedzera Kyari semurume akanaka, anogona kuita basa rake nemoyo wese. Aivawo mumwe wevanhu vekutanga akasimbisa kuti Kyari akaedzwa aine hutachiwana paakaedzwa hutachiona hweCOVID-19. Pazasi pacho paive pakapakirwa padanda rake rewitter munguva dzekutanga dzaKurume 24, 2020;
“Ini ndangosimbisa kuti shamwari yangu yekare & mukoma Abba Kyari, Chief of Staff to Pres. Buhari akaedza zvakanaka kune COVID-19. Ini nomwoyo wose & nokutendeseka ndinomushuvira zvakanaka & kunamatira kuti apore nekukurumidza kwaari sezvandinoita kune vamwe vese veNigeri vakaedzwa, kusanganisira Atikumwanakomana. ”
Kubatana kwaAbba Kyari neCOVID-19:
Mumaawa ekutanga aKurume 24, 2020, zvakaziviswa kune veruzhinji kuti Chief of Staff weNigeria Abba Kyari akaedzwa aine COVID-19.
Mhedzisiro yake yekuyedza yakauya, pazuva re23 raKurume zvichitevera kudzoka kwake kubva parwendo rwepamutemo kuGerman. Rwendo rwakaitirwa kubatsira Nigeria kuwana mhinduro kumatambudziko emagetsi.
Kyari akakurumidza kutamiswa achibva ku Abuja achiendeswa kuLagos pazuva 29th raKurume 2020. Kutarisirwa kwakaringana uye kurapwa zvakaramba zvakapihwa kwaari kuti ave nechokwadi chekuti anodzoka patsoka zvekare. Zvichakadaro, avo vanofungidzirwa kuti vakave nekuvhenekwa Kyari vakayamwa kuti vazviparadzanise panguva iyi.
Zvinosuruvarisa, Femi Adesina- chipangamazano akasarudzika weNigeria pane vezvenhau nekushambadzira kuna President Muhammadu Buhari akasimbisa kuti nyika yarasikirwa aimbova mukuru wevashandi munguva dzekutanga kweMugovera (18th Kubvumbi 2020).
Kusiyanisa vatatu Abba Kyaris weBorno State, Nigeria:
Kubva kuRR; Late Brigadier Abba Kyari, Abba Kyari CHIEF WEVashandi uye Abba Kyari mupurisa. Mufananidzo wechikwereti: Thenigerianvoice.
Chekupedzisira, paLate Abba Kyari's Biography, taona zvakakosha kupa pfupi pfupi nezve vatatu vakakurumbira vane zita rekuti Abba Kyari.
Wekutanga Abba Kyari ndiLate Brigadier Abba Kyari, aive aimbove maneja wemauto kuNorth Central kubva 1967 kusvika 1975.
Ndiye baba vekubereka kuna Senator Abubakar Kyari (Senator anomiririra akakunda sarudzo dza2019 dzeBorno kuchamhembe).
Wechipiri Abba Kyari ndiye aimbova maneja Director weUBA uye anonoka Chief wevashandi kuna Mutungamiriri Buhari. Pakupedzisira, wechitatu Abba Kyari mupurisa anozivikanwa wekuNigeria, hope dzehusiku dzevapambi uye wekupamba tsotsi repamusoro.
Gare gare Abba Kyari's Wiki:
Zita rizere: Abba Kyari.
Inonyanya kuzivikanwa ye: Kuva mukuru weVashandi kuMutungamiri Muhammadu Buhari.
Nyika Yepakutanga: Bornu, Nigeria.
Zuva rekuzvarwa: Pamwe kunonoka kwema 1940s. (zvakavanzika chaizvo nezera rake).
Mukadzi: Akaroora sisi -amu-muramu waAbrahama Tahir. (Zita rakabiwa).
Dzidzo: Yunivhesiti yeWarwick uye Yunivhesiti yeCambridge.
Vana: Aisha Abba-Kyari nevamwe.
Net Worth: Mamirioni (achiri kuongororwa).
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Yenhau Yevadiki pamwe isina kusarudzika biography chokwadi uye kutenda mazviri zvatinoita uye zvatiri.
At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino paLate Abba Kyari, ndokumbira utaure kana taura nesu!